China 50KG Chrome / Kupenda Cast Iron Barbell set vagadziri uye vanotengesa | Meiao
Iyo 50 KG Chrome yakakanda simbi barbell yakaiswa inokwezva huremu hwakagadzirirwa kukudziridza simba uye toning uye kumba. Inoumbwa nemakumi maviri emhando yepamusoro chrome / kupenda uremu mahwendefa seti yacho inogona kuchinjika nyore kuburikidza nesipinha yekuvhara makorari. Izvi zvinopa kukwana kwakachengetedzeka, kudzivirira mahwendefa kubva pakubvaruka uye kuona kudzidzira kwakachengeteka.
0.5 KG Chrome / Painting Kurema Plates
1.25 KG Chrome / Painting Kurema Plates
2.5 KG Chrome / Painting Kurema Plates
5 KG Chrome / Painting Kurema Plates
1.5m yakasungwa bhaa
Zviri nyore kugadzirisa kushomeka kwekurovedza muviri nekuwedzera kana kudzikisa uremu hwemahwendefa.
4 yakakwira density mapurasitiki spinlocks inodzivirira mahwendefa kubvaruka uye inopa yakachengeteka Workout.
Iyo yekubatirira kwepurasitiki iri pakati peye yega spinlock dumbbell bar inochengetedza kuchengetedzeka uye kugadzikana kubata pane yega yega Workout.
Iyo yepamusoro yekubata pateni yepakati kubata kubata knurling yakagadzirirwa kudzivirira ruoko kutsvedza kana uchiita wakadzokororwa dumbbell seti.
Simba kudzidzisa inzira inoshanda yekudzora mafuta emuviri, kuwedzera kuonda kwemhasuru uye kupisa macalorie. Kuwedzera iyo 50kg Cast Iron Dumbbell Set kune yako kugwinya chirongwa kwakaringana kune toning nekusimbisa yako yepamusoro uye yepasi muviri. Iyo dumbbell yakagadzika gwara rekurovedza inosanganisirwa ichakubatsira iwe kunongedza akasiyana siyana mapoka emhasuru senge chipfuva, triceps, biceps, musana uye makumbo. Bhokisi repurasitiki dema rinobatsira kutakura iyo dumbbell yakamisikidzwa ichishandawo senzvimbo yekuchengetera yezvinhu zvega zvega.
Zvese zvinhu zvinoiswa mubhokisi repurasitiki, pamusoro pebhokisi repurasitiki isa zvimiti (chinamirwa chinogona kugadziridzwa), wozoisa bhokisi, uye shandisa pallet.
Pashure: Cement dumbbell
Zvadaro: Kupenda / Chrome Cast Iron Dumbbell yakaiswa
Zvekutengesa Shandisa Gym Equipment 15Kg Kurema Kugadziridza ...
Factory vagadziri 50kg ajustable Chrome / pai ...
Portable chinjika uremu vachisimudza Chrome Barbe ...
20kg Gym Equipment Gray Kupenda Kukanda Iron Iron Adju ...
6kg matte tsvuku pingi bhuruu vinyl Kuchengeta inotakurika ...